September 2010 – Everybody Read TChen
Everybody Read TChen
T Chen eating
တီချမ်းပြောတဲ့ အချစ် ဒဿနများ
ကိုယ်ပိုင် English ကဗျာများ
jewel’s songs ခံစားမှုများ
ဟိုတစ်စ ဒီတစ်စ ချစ်ခြင်းလေးတွေ
Disney ရဲ့ မင်းသမီးလေးတွေ
သက်တံ့ တွေရဲ့အဆုံးမှာ (ပေးစာများ)
မီ နှင့် သူမ၏ ကမ္ဘာ သုံးလွှာ
Yemin khant on သွေးစစ်သင့်မစစ်သင့် နဲ့ သွေးဘယ်မှာ စစ်ရမလဲ
khantmin thu on ခြင်ကိုက်ရင် HIV ကူးပါသလား?
issacclake issac on ဂျူဝဲလ် | အခါလွန် Jewel | Just Passing Time
Crystal on သူစိမ်း နဲ့ သူစိမ်းပြင်ပြင်
BarNyar on မန်းလေး မူလလက်ဟောင်း နှစ် (၃၀) ကျော် ဒေါ်တော မုန့်တီ
jewel's songs ခံစားမှုများ
Read With Me by T Chen
freedom of speech/different perspectives
3:05 PM me: http://www.youtube.com/watch?v=ixy0vRE3H-U&feature=related
i think she saysalot of “you know”
3:07 PM you might have some files of her in ur system
3:08 PM she is an asylum refuge
3:09 PM look at this one
she seems like i don’t know,
but i also felt like she has been forced to say like this
like she has to read it by heart and say it in the public “u know”
________________________________________ 8 minutes
3:18 PM MS: 🙂
I like her speech the other day whatever it counts saying UN cannot/is not doing anything
but i never like Burma campaign UK
3:19 PM these girls are like puppets
MS: That’s why I don’t even read Little Daughter
me: that’s how i feel like too
i wonder whether they really believe what they r doing
or even know what they are doing
3:20 PM may be this is another form of British colonialism
u know another round
MS: How can they know dear?
me: that’s why i mean
MS: They have not been brought up like us
me: tz studied IR in Myanmar
people can go to library of course
soalot of the information they speak out there are just not 100% correct
3:21 PM MS: it is absolutely true
me: they keep on saying that life in Myanmar is difficult
i don’t agree with that
may be they don’t have enough survival skills
MS: in My friend office there is one British woman saying Education system in Myanmar is very bad
me: i want to write something about this but then i think better stay out of it and
let them do their things
3:22 PM MS: My friend replied that it was what the British had done
me: at least someone need to do this
MS: it was not like that before
when we were with our kings
me: after listeningalot of her speech
3:23 PM i am more sure that she is justatoken prune
me: they are just some kids happen to get abroad and SPEAK English
listen to this one is terrible
3:24 PM MS: the boss is Mark Farmaner
me: the boss of who?
MS: the boss of Zoya Phan
Nang Seng …
Wainin Pwint Thon
3:25 PM me: but for all of it
i think her pronunciations is OK
3:26 PM My dear
3:27 PM me: yes
a girl needs to eat
3:28 PMaboy too
otherwise we will end up on the street
we still haveacareer
they will end up accusing the bad things of the govt
3:29 PM sometimes I am thinking about it
MS: Is Aung SSK really happy with her life?
me: what if they cannot do this
and i don’t think they can do this even in England for the rest of their life
i mean for nothing asatangible results
3:30 PM i know what u mean
MS: Once she is famous and if she returned to England leaving Myanmar like this
me: not her publicity life that make people think she isaheroin
MS: She will also lose her future
me: but her real life asaperson right?
me: i am so glad to have the same IQ level friend to talk things like this u know what i mean
3:31 PM u can’t talk to ruree like this hehe
or may be she should do something like this too
if she deadly wanna be famous
3:34 PM i want to post what we had talked on my post
3:36 PM MS: u can post anonymously
3:37 PM me: what about ur name
but again every bodies names MS right hehe
do u want to editalittle bit
3:38 PM me: what does u mean byalittle daughter?
MS: The world might forget about Nelson Mandela
me: u don’t want to what?
MS: Little Daughter wasabook written by Zoya Phan
3:39 PM do u get the pdf i send?
3:40 PM MS: which pdf?
me: about her father?
3:41 PM But I am sorry
I don’t want to read anything
3:42 PM me: send to me then
MS: They have done these activities against the govt and they are put into prison
At least they have done something
But people in the jungle
in the rural villages
they did not doasingle thing
3:43 PM and some were raped some were killed
But their stories remained untold
3:44 PM On the account of respecting the lost one who suffered the loss for the crimes they did not commit
I will not read or comment on who is right who is wrong
3:45 PM me: well darling
they are not refuges yet and not asylum yet
and beside they might not speak English
i thinks that what happened
3:46 PM MS: But they breath Oxygen
They drink water
They don’t breath CO2 and drink urines
________________________________________5minutes
3:52 PM me: well
even we breathe and eat the same thing
otherwise everybody will be the same
i think that’s why communism does not work and failed
Posted on September 30, 2010 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ရောက်တတ်ရာရာ4 Comments on freedom of speech/different perspectives
ကူကယ်ရာမဲ့ လွတ်လပ်မှုမှာ လွင့်ပြီ
မိုင်ထောင်ချီဝေးလဲ ကိုယ်တယောက်တည်း ထွက်ခဲ့
နိူးအထမှာ ဒဏ်ရာသာ ရစ်ကြွင်း
မင်းပေးတဲ့ အရာရာ ညစ်နွမ်းသည်
ယောင်ချာချာ ကိုယ်မိုက်ပြီး မူး
မှားပြီ ကိုယ်မှားပြီ မင်းကိုယုံတာမှားပြီ
ဝေးပြီ တို့ဝေးပြီ ချစ်လာတာကြာခဲ့ပြီ
လာ လာ လာ လာ
Posted on September 30, 2010 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, သီချင်း ခံစားမှုများ1 Comment on အတိတ်
ဒီအချိန်ပြတင်း အပြင်မှာ မိုးတို့ကျနေပြီ
ရင်မှာ ခံစားတာတွေ အတိတ်သို့ လွင့်ပျယ်ပြီ
မြိုသိပ် (လွန်း) လို့ ကြပ်မွန်းပြီ
အိုမင်းမရှိခဲ့ရင် အတိတ်လဲမရှိပြီ စိတ်နာတာတွေမရှိ
ဒါတောင်ချစ်ခွင့်ရှိရင် မင်းပဲ ရွေးချယ်မည်
အိုမင်းမရှိခဲ့ရင် ကိုယ့်ဘဝကလေ လမ်းတောင်ဘယ်မှာမသိ
အရာရာ အပျော်တွေဆိတ်သုန်းပြီ အရာရာအဓိပ္ပါယ်တောင်မရှိ
ဒီအချိန်မင်း ဘယ်ဆီမှာ ပျော်ပြီး (ကိုယ့်အား) မေ့နေပြီ
Posted on September 30, 2010 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, သီချင်း ခံစားမှုများLeaveacomment on လွမ်း
ထူးမခြားနား ဘန်ကောက်နေ့ရက်တရက် ကိုဖြတ်ရပြန်ပါတယ်။
တနေ့လုံးအိပ်တယ်။ ညနေပိုင်းကျတော့ ရုံးဆင်းချိန်လောက်မှထတယ်။ (ဟုတ်ကဲ့ ရုံးမတက် ပါဘူး)
ပြီးတော့ ရေမိုးချိုးပြီးတော့ ဘာစားရမလဲ စ စဉ်းစားပါတယ်။ ရဲလေးနဲ့ ထိန်ဝင်းကလဲ ကိုယ့်ကို လာပြီး “ဘာစားမလဲအကို…?” လို့လာမမေးကြပါဘူး။ အဲ့တာနဲ့ပဲ (သူများတွေအတွက်) ရိုးရိုး တန်းတန်း (ကိုယ့်အတွက်) ပျင်းရိငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းလှစွာ ညနေပိုင်းအစာရှာဖို့ ကိုစရပါတယ်။ “ခွေးအ” တွေဆိုရင်လဲအကောင်းသား သုဿန် ထဲသွားပြီး အလောင်းကောင်တွေ တူးစား လိုက်ယုံပဲ လို့ တွေးမိပါသေးတယ်။ နောက်တော့ ကိုယ့်အတွေးကို ကိုယ်သဘောကျလို့ နှုတ်ခမ်းသက်သက်နဲ့ ရယ်လိုက်မိပါရဲ့။
ဘန်ကောက်ကီရန်း တွေရဲ့ ပုံမှန်နေ့တဓူဝ နေ့တနေ့ကတော့ ဘယ်လိုနေမလဲ ကိုယ်မသိခဲ့ပါ။ နှစ်နှစ်ဆိုတဲ့ အချိန်အတွင်းမှာတောင် ကိုယ်တကယ် သေချာမသိခဲ့ပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့နေ့တွေဟာ အိပ်ရင်အိပ် မအိပ်ရင် အလုပ်မှာ ဆိုတော့လဲလေ။ ကိုယ်ဟာ စက်ရုပ်ဖြစ်မှန်း မသိ ဖြစ်နေခဲ့ တာကြာပေါ့။ အဲ့တာကိုကလဲ ဘန်ကောက်ကီရန်းတွေရဲ့ ပုံမှန်တနေ့တာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ့်အတွက်ကတော့ တနေ့လုံးအိပ် အိပ်ရာကထ စားစရာရှာစား တကယ့်ကို အခြေခံ လိုအပ်ချက်ပဲ လုပ်ချင်တာပါ။ အဲ့လိုပဲ လုပ်ခဲ့တယ်။ ဘဝက တိုတိုလေးပါ အရေးမပါတာတွေ အရေးမကြီးတာတွေ အရေးလုပ်စရာမလိုတာတွေအတွက် အချိန်မပေးနိုင်ပါဘူး။
အရေးကြီးတာကတော့ အအိပ်နဲ့ အစားပါပဲ။ တခါက ကိုယ်ရေးဖူးသလိုပဲပေါ့ ကိုယ့်ဆီကနေ ဘယ်သူမှ ယူမသွားနိုင်တဲ့ အရာတွေထဲမှာ အဲ့နှစ်ခု က အဓိက ကျတယ်လေ။ ထားပါတော့ တခုကိုလုပ်ပြီးပြီဆိုတော့ ကျန်တဲ့တခု ကို ဆက်ဖြည့်ဖို့အတွက် အစာရှာထွက်ရပါတယ်။
ဘာစားရမလဲလဲ မသိပါဘူး။ ချက်ပြုတ်စားချင်တဲ့ စိတ် မဖြစ်တာလဲ ကြာလှပေါ့။ တနေ့လုံး လိုလို အိပ်နေခဲ့တာဆိုတော့ ကိုယ့်အတွက်က မနက်စာ နေ့လည်စာ ညစာ ပေါင်းစားရမှာပါ။ နိူးနိူးချင်း ဖျော်သောက်ထားတဲ့ ငှက်ပျော်သီး တခွက်တော့ ရှိပါရဲ့။ ဗိုက်ထဲကို ဒီနေ့အတွက် ပထမဆုံးဝင်တဲ့ အဟာရပေါ့။ အဲ့တာနဲ့ပဲ အိမ်နားက စင်တာတခုကိုသွားပါတယ်။
စားချင်တာက အမဲသားကို ငရုတ်ကောင်း အသီး နဲ့ကြော်တဲ့ ဟင်းနဲ့ ထမင်းပုံ ပြီးတော့ ကြက်ဥ ဟပ်ဖ်ဖရိုင်လေးနဲ့စားချင်တာပါ။ ရှာတော့ မတွေ့ပါဘူး။ အဲ့တာနဲ့ လျောက်ကြည့်ရင်းနဲ့ နောက်ဆုံးတော့ ဘာစားဖြစ်သလဲဆိုတော့ JFK အဲလေ KFC ပါ။ အဲ့ဒီ ကြက်ကြော်ကို စားဖို့ တန်းစီနေရင်းနဲ့မှ ဒီပိုစ့်လေးကို ရေးဖို့အတွေးပေါက်တာပါ။ တန်းစီ ပြီး ကြက်ကြော်ရလာတော့ ကိုယ်တယောက်ထဲထိုင်စားရင်း ဆိုင်ရဲ့ မှန်နံရံကနေတဆင့် အပြင်ဘက်က သွားသွားလာလာ လူတွေကို ကြည့်ရင်း အတွေးတွေ များရပြန်ပါတယ်။ အဲ့လို တွေးတတ်တာကပဲ စာရေးချင်တဲ့ စိတ်တွေကို ဖြစ်ထွန်းစေတယ်ထင်ပါတယ်။
စားပြီးသွားတော့ လမ်းလျောက်ပြန်ပါတယ်။ စင်တာက အိမ်နဲ့ မနီးမဝေးပါ။ အမှန်ကတော့ မဝေးပါဘူး။ ဝေါ့ခ်ကင်း ဒစ်စတန့်ပါ။ ဓါတ်ရထားနဲ့ဆိုရင် တမှတ်တိုင်ပါပဲ။ မိုးကတဖွဲဖွဲလေး တော့ရွာနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လဲ ကိုယ်က ဘယ်တုံးကမှ မိုးရွာတာ ကို စိတ်အနှောင့် အယှက်မဖြစ်ခဲ့သလို မိုးရွာထဲမှာ လမ်းလျောက်ဖို့ ကိုလဲ မတုံ့နှေးခဲ့တာဆိုတော့…
နားထဲမှာ နားကြပ်ကိုတပ်ရင်း မိုးရွာထဲမှာ လမ်းလျောက် သီးချင်းလေးတအေးအေး ညည်း ရတာ သိပ်ကို အရသာရှိပါတယ်။ လွတ်လပ်တယ်ဆိုတာ ဘာကိုပြောတာလဲဆိုတာကို စကားလုံးတွေနဲ့ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ပြစရာမလိုဘဲနဲ့ နားလည်ချင်ရင် မိုးရွာထဲမှာ သီချင်းဆိုရင်း လမ်းလျောက်ပါ။ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ ကိုယ်အမြဲ လိုလို ညည်းဖြစ်တဲ့ သီချင်းကတော့ “မိုး….လေးဖွဲတုံးသတိရတယ်…..မြင်နေတဲ့ပြတင်းတံခါးဆီပဲ……သွားလို့မော့ကြည့်…………….ပြောလိုက်ချိန် တကိုယ်ရေ ထဲ မိုးစက်တွေအလယ်…..” ဆိုတဲ့ သီချင်းပါပဲ။
လမ်းမှာ မီးနီမိနေတော့ အကြာကြီး ရပ်စောင့်ရပါသေးတယ်။ ကားတွေအတွက်တော့ မီးက စိမ်းနေတယ်လေ။ လူတွေအတွက်ပဲ မီးနီတာ။ ရပ်စောင့်နေရင်း မြန်မာပြည်မှာဆို ရပ်စောင့် စရာမလိုဘူးလို့ တွေးမိပါသေးတယ်။ အနှစ်နှစ်ဆယ်လုံးလုံး ကျင့်သုံးလာတဲ့ အမူအကျင့်တွေ အတွေးအခေါ်တွေက နိုင်ငံရပ်ခြားမှာနှစ်နှစ်လောက် နေလိုက်ယုံနဲ့တော့ ချက်ချင်း ဘယ်ပြောင်းနိုင်ပါ့မလဲ။
မီးပွိုင့်မှာ ရပ်နေရင်း ဓါတ်တိုင်ကို မော့ကြည့်မိတော့ လှပတဲ့ ညရှုခင်း တခု ကို မထင်မှတ်ဘဲ တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ မိုးဖွဲဖွဲလေးတွေ ရွာနေတုံးမှာ ဓါတ်တိုင်အောက်ကနေ လမ်းမီးလုံး ကိုမော့ကြည့်ဘူးပါသလား မိတ်ဆွေ…?
တဖွဲဖွဲရွာနေတဲ့ မိုးလေးတွေက ရေစက်တစက်ဖြစ်သွားဖို့လောက်အထိလဲ မကြီးဘူးလေ။ ရေမှုန်လေးလောက်နဲ့ပဲ ဝေ့ကာ ဝဲကာနဲ့ အောက်ကို ကျလာလိုက်ကြတာ လှပတဲ့ မြင်ကွင်းက ကိုယ့်ကို အတွေးတွေ ဝေစေတာပေါ့။ လူ့ဘဝလိုပဲလေ….ဘယ်ကမှန်းမသိတဲ့ ဟိုးအမြင့်ကြီး ကနေ လွတ်ကျလာလိုက်ကြတာ နောက်ဘယ်မှာဆုံးမယ်မှန်းမသိတဲ့ တနေရာကို မရောက် ခင်အထိ ကိုယ်တို့ဘဝတွေဟာ လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ကြီးကို ပြုတ်ကျနေတာပါလား?။ နောက်ပြီး အခုလိုအဆက်မပြတ် ပြုတ်ကျလာနေတဲ့ ရေမှုန်လေး တွေဟာ လမ်းခုလတ်မှာ တမှုန်နဲ့တမှုန် ပေါင်းစပ်သွားကြတာလဲရှိရဲ့။ ကိုယ့်ဘာသာ သီးခြား ကျဆင်းနေကြတာတွေလဲ ရှိရဲ့။ လူတွေနဲ့ မတူဘူးလား…?
အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ရေမိုးချိုး ပြီးတော့ ဂျူးရဲ့ စာအုပ်တအုပ်ကို ပြန်ဘတ်မိပြန်ပါတယ်။ “ကံကြမ္မာကိုမယုံကြည်ကြသူများ” တဲ့…..ငယ်ငယ်တုံးက ဘတ်တာနဲ့မတူတာက ဒီတခေါက် ကိုယ်ပြန်ဘတ်တဲ့ အချိန်မှာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံတွေအရ သူရေးတဲ့ ဆေးပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဝေါဟာရတော်တော်များများ ကိုနားလည်လာတာပါပဲ။ မဆီမဆိုင် တခုတွေးမိသေးတယ်… ငယ်ငယ်က ဂျူးကို ကြိုက်ခဲ့တာ ကိုယ့်ရဲ့ မသိစိတ်က ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်နေတဲ့စိတ်တွေ ကဲနေ ခဲ့လို့များလားလို့…။ ခုတော့လဲ သေသေချာချာ အရွယ်ရောက်လာတော့ “ကိုယ်” ဆရာဝန် မဖြစ်ချင်ခဲ့တာ သေချာပါတယ်လေ။ တကယ်ဖြစ်ချင်လို့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့သူတွေကိုတော့ (တကယ့် ဆရာဝန်တွေကိုတော့) ခုထိအားကျမိတုံးဘဲ။ ကိုယ်တိုင်သာမဖြစ်ချင်တော့တာ သူတို့ကို ဂျူတီ ကုတ်ဖြူဖြူလေးတွေနဲ့တွေ့ရင်၊ ဆရာဝန်ရုပ်တကယ်ပေါက်တဲ့ မျက်နှာ ကြည်ကြည်လေးတွေ (အစိမ်းရောင် (ငွေကြေးရဲ့အရောင်) သန်းမနေတာမျိုး တချို့ဆရာဝန်တွေက ဘူဇွာရုပ် ပေါက်တယ်ပြောရမလား ချစ်တီးရုပ်ပေါက်တယ်ပြောရမလား) တွေတွေ့ရင် တကယ့်ကို နှစ်ချိုက် သဘောကျမိနေပါသေးတယ်လေ။
နောက်တော့ ရေချိုးကာနီး မောင်က ဖုန်းဆက်တယ်။ နေကောင်းရဲ့လားတဲ့။ တခါတခါ လူတယောက်ကိုယ့်ကို ဂရုတစိုက်ရှိတတ်တာကို ကျေနပ်နေပေမယ့် အခါများစွာတွေမှာ တော့လဲ ကိုယ်က ရှုပ်တယ်ထင်တတ်ပြန်ပါသေးတယ်။ (ပြောပါတယ် ကိုယ်က မကောင်းဘူုး လို့)
ခုတော့လဲ ညရောက်ပြန်လို့ ပုံမှန် လုပ်နေကျအတိုင်း ရုပ်ရှင်လေးဘာလေးကြည့် အီးမေးလ်လေး ဘာလေးစစ်၊ စာလေးဘာလေး (ဒီနေ့လို) သေချာ အာရုံရလာရင်ရေး။
အော်ကုန်သွားပြန်ပြီ ပုံမှန် နေ့တဓူဝ နေ့တနေ့…
Posted on September 27, 2010 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ရောက်တတ်ရာရာ12 Comments on အရှေ့တွေး အနောက်တွေး
ကိုယ့်မှာ မူးယစ် နောင်တများ
ဟိုတချိန်က သူပေးတဲ့ အနမ်းများ
တူတူထိုင်ကာ ပြောခဲ့ စကားများ
တို့ ရဲ့အနာဂတ်က မှုန်လို့ ဝါး
Posted on September 25, 2010 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, သီချင်း ခံစားမှုများ1 Comment on မှုံဝေဝေ နားလည်ခဲ့တယ်
မောင် စာရေးထား နော်
Posted on September 23, 2010 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, မောင့် ကဗျာများ1 Comment on အလွမ်းဋီကာ
ငါ မင်းကို မိုးတိမ်တွေပေါ်မှာ ချစ်မယ် (အခန်း-က-၉)
“ဝက်ဝံက ငါ့ဆီက ဓါတ်ပုံတပုံတောင်းသွားတယ်သိလား” မက်ဒေါနယ်မှာ နေ့လည်စာစားနေရင်းကျမ ကျိရိ ကို ပြောပြလိုက်ပါတယ်။
“ကျောင်းသားကဒ်အတွက်ရိုက်ထားတဲ့ ပိုစ့်စကတ်ပုံပါ၊ သူကြမ်းပေါ်ကနေကောက် ရတာ ”
“သူက ဘာလုပ်မလို့တုံး” ကျိရိက မျက်လုံးပြုးရင်းမေးပါတယ်။
“ငါလဲမသိဘူးလေ၊ တကယ်လို့ sexy lara ကသာ ငါ့ကို အဲ့ဒီအချိန်က ကြည့်မနေရင် ငါမပေးပါဘူး”
“သူနင့်ကို လိုက်ချင်လို့များလား?” ကျိရိ က ဘာဂါ ကို ကိုက်ရင်းမေးပါတယ်။
“မဟုတ်လောက်ပါဘူး….?”ကျမ ခေါင်း ကို တချက်သပ်လိုက်ရင်း ဖြေလိုက်တယ်။ အစက ကျမ ဆံပင် ကို ပြန်သွားဖြောင့်မလို့ဘဲ။ ဒါပေမယ့် ကောက်ထားတာ မကြာသေးတဲ့ ဆံပင် ကို အတင်းပြန်ဖြောင့်ရင် ဆံပင်ကပျက်ပြီး ဖွာသွားတတ်တယ်လို့ ကြားဘူး ထားတော့ ပိုရုပ်ဆိုးသွားမှာ ကြောက်တယ်လေ။ အဲ့လို ပြန်ဖြောင့်လိုက်မှ ဟင်းရွက်ခြောက် ထုပ် နဲ့ တကယ် ပိုတူနေအုံးမယ်။ အဲ့တော့ ကျမမှာ နေ့တိုင်း အဲ့ဒီ ဆံပင်ကိုပဲ သေချာ အချိန်ပေးပြီးတော့ ဂရုတစိုက်နဲ့ တမင်တကာ ဖြီးနေရတယ်။ အတတ်နိုင်ဆုံး ဝက်ဝံနဲ့ မတူအောင်လို့လေ။ အဲ့တာအကုန် သူ့အပြစ်ပဲ။ မနက်တိုင်း မှန်ရှေ့မှာ ဘီးဖြီးတဲ့အချိန်ဆို သူ့ကို သတ်ပစ်ချင်လောက်အောင်မုန်းမိတယ် တကယ်ပဲ။
“နင်ကြည့်လိုက်စမ်း…ဘယ်သူလဲလို့?” ကျိရိက ကျမ လက်ကို အလန့်တကြား ဆုပ်ကိုင်ပြီး ပြောတယ်။
ခပ်မြင့်မြင့် ခပ်တောင့်တောင့် အရိပ်တခု မှန်တံခါးကို တွင်းဖွင့်ပြီး လူတယောက် ဆိုင်ထဲကို ခပ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ လှမ်းဝင်လာတယ်။ ကျမရော ကျိရိရော နှစ်ယောက် စလုံး “ကြောင်” သွားကြတယ်။ ဒီလိုမျိုး ဘာဂါဆိုင်မှာ “ရီလု” ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ မထင်ထားဘူးလေ။ သူမက မျက်နှာပြောင်နဲ့ ဆံပင်တွေကို ခေါင်းပေါ်မှာ ပင့်တင် ပြီး ခပ်မြင့်မြင့် ခပ်ပွပွ ကပိုကရိုလေး စည်းထားတယ်။ ကိုယ်ပေါ်မှာလဲ စွပ်ကျယ်လက်ပြတ်နဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီ ခပ်နွမ်းနွမ်း စုတ်စုတ်တထည် ကို ရိုးရိုးလေးပဲ ဝတ်ထားတယ်။ ထသွား ထလာ သာမန်လူငယ် ပုံစံနဲ့ပါပဲ ဒါပေမယ့် သူ့ကို ကြည့်ရတာ သိပ်မိုက်တယ်။
“သူလဲ မက်ဒေါနယ်စားတာပါပဲလား? ကျိရိက အရမ်းကိုကျေနပ်တဲ့ပုံနဲ့ ပြောတယ်။
ရီလု က သူ့လိုပဲ ခပ်စုတ်စုတ် ဂျင်းဘောင်းဘီ ဝတ်ထားတဲ့ ကောင်လေး ချောချောလေးတယောက်နဲ့ပါ။ နှစ်ယောက်စလုံး အရမ်းကို ချစ်ကြည်နူးနေကြတဲ့ ပုံစံနဲ့ ကောင်တာရှေ့မှာ တန်းစီ နေကြတယ်။ ရီလုက သူမရဲ့ လက်တဘက်နဲ့ ကောင်လေးရဲ့ လက်ကို ချိတ်ထားတယ်။ ပြီးတော့ ခေါင်းကိုလဲ ကောင်လေး ပုခုံးပေါ်မှာ မူမူနွဲ့နွဲ့လေး မှီပြီးထားတော့ အရမ်းလဲ ပျော်နေတဲ့ပုံနဲ့ လက်ကို ဟိုလွှဲဒီလွှဲလုပ်နေသေး တယ်။
သူတို့က ဘာဂါနဲ့ အားလူးချောင်းကြော်တွေ ဝယ်ကြတယ်။ လူတွေအများကြီး ကလဲ သူတို့ကို တကူးတက ရပ်ကြည့်လို့။ ကြည့်ရတာ ရီလု ရုတ်တရက်ပေါ်လာလို့ အားလုံး က အရမ်းကို အံ့အားသင့်နေကြပုံပဲ။ ဘယ်သူမှတောင် သူ့ကို အော်တိုရေးခိုင်းဖို့ သတိရကြပုံမရဘူး။ သူမ ဘာဂါ ကို တဘက်ကစားရင် ခပ်မိုက်မိုက် ပြန်ထွက်သွားတာကိုပဲ ကြည့်နေမိကြတယ်။ ပြီးတော့ ဆိုင်အပြင်ဘက်မှာ အသင့်ရပ်ထားတဲ့ ကားတစီး ပေါ်တက် သွားကြတယ်။
“အဲ့ကောင်လေးက သူ့ရည်းစား အသစ်များလား? ကြည့်ရတာ မျက်နှာများမယ့်ပုံပဲ” ကျိရိက ပြောပါတယ်။
ခုနက ရီလု ဆိုင်ထဲကိုဝင်လာတုံးက သူမ ကျမ ကို တွေ့သွားမှာ သိပ်ကြောက်သွားခဲ့တယ်။ အထူးသဖြင့် ကျမ ခေါင်းကိုပေါ့။ ကျမစိတ်ထဲမှာ ကျမ ဟာတကယ်တော့ ဒေါင်းယောင်ဆောင်တဲ့ ကျီးလို ဒါမှမဟုတ် ဦးနှောက်မရှိတဲ့ နာမည်ကြီးတွေ လုပ်သမျှ ဘာမဆိုလိုက်တုတဲ့ လူငယ်တယောက်လိုပဲ ခံစားလိုက်ရတယ်။ အဲ့လိုမျိုး ကျမ ကို မမြင်စေချင်ဘူးလေ။ ရှက်စရာဘယ်လောက်ကောင်းသလဲ။ တကယ်လို့ ဝက်ဝံလဲရှိနေရင် သူ့ရဲ့ ကျမနဲ့ တပုံစံထဲ ညှပ်ထားတဲ့ ဆံပင်ပုံနဲ့ ဆိုရင်တော့ ကျမရဲ့ နေရထိုင်ရခက်ခြင်းတွေ ကို တဝက်ခွဲပေးလို့ ရမှာဘဲ။
Posted on September 14, 2010 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, အခန်းဆက်ဝတ္ထုရှည်2 Comments on ငါ မင်းကို မိုးတိမ်တွေပေါ်မှာ ချစ်မယ် (အခန်း-က-၉)
ငါ မင်းကို မိုးတိမ်တွေပေါ်မှာ ချစ်မယ် (အခန်း-က-၈)
ကျမနောက်မှာ ထိုင်တဲ့ ဝက်ဝံ က သိပ်ကို ငြိမ်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်အထိလဲ ဆိုရင် ငြိမ်လွန်းလို့ တခါတခါ တကယ်ကော အဲ့ဒီလူတယောက် ရှိမှ ရှိရဲ့လားလို့ ထင်မိတဲ့ အထိပါဘဲ။ သူတခါမှ ဆရာကို စာလှမ်းမေးတာမျိုး မတွေ့ဘူးဘူး၊ အတန်းထဲမှာတော့ သူက “မျက်လွှာချသမား” တွေထဲမှာပါတယ်။ ကျမ တခါတခါ ပုခုံး ပေါ်ကနေ ကျော်ပြီးတော့ သူ့ ကိုခိုးကြည့်တတ်ပါတယ်။ သူ အိပ်များပျော်နေသလားလို့ပေါ့လေ။ တကယ့်ကိုပါပဲ ခဏခဏ ဆိုသလို သူက စားပွဲပေါ် လက်မှောက်ချပြီး အိပ်နေတတ် ပါတယ်။ တခါတခါ ကျတော့ စာအုပ် တအုပ်အုပ်ကို ခိုးဘတ်နေတာတွေ့တယ်။ ဘတ်နေရင်းနဲ့ ကြည်နူးနေတဲ့ သူ့မျက်နှာ ကိုကြည့်ရတာ သေချာတယ် ကျောင်းစာနဲ့ ပတ်သက်တာတော့ ဟုတ်ပုံမပေါ်ဘူး။ ပြီးတော့ အလယ်တန်း စတုတ္ထနှစ်ပဲ ရောက်နေပြီ လက်ရေးလက်သားကလဲ ညံ့ပါ့၊ ကွေ့လိုက်ကောက်လိုက်နဲ့ မူလတန်း ကျောင်းသားကျနေ တာပဲ။ ပြီးတော့ ပျင်းတဲ့နေရာမှာလဲ နံပါတ် “၁” ပဲ။ သူဘယ်တုံးက မှ အိမ်စာ ထပ်တာ မတွေ့ရဘူး။ ကျမတို့က အတန်းထဲမှာ အိမ်စာတွေ စာအုပ်ထပ်စရာတွေရှိရင် နောက်ဆုံး အတန်းကနေ အရှေ့ဆုံးတန်းအထိ တဆင့်ပြီး တဆင့် လက်ဆင့်ကမ်းသွားကြရလေ့ ရှိတယ်။ ကျမက စာအုပ်ထပ်ဖို့ သူ့ကို လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့ အခါတိုင်း သူက ဘာမှမသိ သလို ပုံစံနဲ့ ပခုံးတွန့်တွန့် ပြလေ့ရှိတယ်။ အဲ့လို အချိန်မျိုးမှာဆို စင်မင်းက သူ့အတွက် ဖုံးကွယ်ပေးတတ်တယ်။ သူတို့နှစ်ယောက် ဘယ်တုံးကများ ချစ်သူငယ်ချင်းတွေ ဖြစ်သွားကြသလဲတော့မသိဘူး။ မုန့်စားဆင်းချိန်တိုင်းလဲ တူတူ အမြဲ တတွဲတွဲတွေ့ရလေ့ ရှိတယ်။ ကျောင်းအချိန်တွေမှာဆိုရင် သူတို့ ရဲ့ ဘေးနဲ့ ရှေ့မှာ ထိုင်နေတဲ့ ကျမ ဟာ လူအပိုတယောက်လိုပဲ။ အဲ့အရွယ်ယောက်ျားလေးတွေ အကုန်လုံးက မိန်းကလေးတွေကို ဂရုမစိုက်ကြဘူး၊ အထင်မကြီး ကြဘူးလား မသိပါဘူး?။
အိမ်စာမလုပ်တဲ့ ဝက်ဝံဟာ သင်္ချာမှာတော့ သိပ်တော်ပါတယ်။ အရှေ့တန်းကနေ ပြန် လက်ဆင့်ကမ်းလာတဲ့ သင်္ချာ အဖြေလွှာစာရွက်တွေ ကနေတဆင့် ကျမ သူ့အဖြေလွှာ ရမှတ် ကို အမြဲတွေ့ရလေ့ရှိတယ်။ စာမေးပွဲ စစ်တိုင်းစစ်တိုင်း သူက သင်္ချာမှာ အမြဲ (၁၀၀) အမှတ်ပြည့်ပဲ။ တခါတလေကျရင် လူပုလေးက သူ့ကို အတန်းရှေ့ထွက်ပြီးတော့ ကျောက်သင်ပုန်းပေါ်မှာ သင်္ချာပုစ္ဆာ တွက်ခိုင်းတတ်ပါတယ်။ သူက တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် နဲ့ပဲ ပြီးအောင် တွက်တတ်တယ်။ တွက်တာလဲ တခြား လူတွေအကုန်လုံးထက် မြန်တယ်။ လူပုလေးမျက်နှာ ပေါ်မှာ အံ့သြတဲ့ အရိပ်တွေ ဖြတ်သွားတာတောင် ကျမ တွေ့ဘူးတယ်။ အားရင်းတခါက ပြောတဲ့ သင်္ချာ မေးခွန်းလွှာ ခိုးတာ သူ့အတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ဟုတ်လောက်တယ်။ ဒါပေမယ့် တခြား ဘာသာ တော်တော်များများ မှာတော့ သူက ညံ့တဲ့ အထဲမှာတောင်ပါပါတယ်။ အိမ်စာ မထပ်နိုင်တဲ့ အတွက်လဲ ခဏခဏ အပြစ်ပေးခံရတတ် တယ်။ ဒါလဲ ဒင်းက မမှတ်ပါဘူး။ နောက်ဆုံး sexy lara ရဲ့ အိမ်စာ ကိုတောင် မထပ်ဘဲ သူမို့နေရဲတယ်။
တနေ့ ကျမတို့တွေ ဆရာမ sexy lara ရဲ့ အတန်းမှာ စာသင်နေကြတဲ့ အချိန်ပါ။ အဲ့နေ့က sexy lara ကြည့်ရတာ သာမန်ထက် ပိုပြီး စိတ်လက်ကြည်သာနေသလိုပဲ။ ကျမတို့ အားလုံးကိုလဲ ချောကလက် ဘီစကစ်တွေ ကျွေးပါသေးတယ်။ ရုတ်တရက် ကျမ ကျောကိုနောက်ကနေ လူတယောက်က လက်နဲ့လှမ်း ကုတ်လိုက်တာ ခံစားလိုက်ရတယ်။ ကျမလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ ဝက်ဝံ ဖြစ်နေတယ်။ ကျမ ကို နောက်ကနေ လက်နဲ့ ကုတ်နေတာ သူပေါ့။ ပါးစပ်မှာတောင် ချောကလက် ဘီစကစ်တွေ ကပ်နေသေးတယ်။
“မင်း ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ကျနေတာမှလား?” သူက ကျမရဲ့ ကျောင်းသားပိုစ့်စကတ် ဆိုက် ဓါတ်ပုံတပုံ ကို လှမ်းပေးရင်း ပြောပါတယ်။ ဓါတ်ပုံက ကြည့်ရတာ ကျမ ပစ္စည်းတွေ ယူတုံးက လွယ်အိတ်ထဲကနေ မတော်တဆ ကျသွားတယ်ထင်ပါရဲ့။
“မင်းရဲ့ ဓါတ်ပုံ………..ငါ့ကို…….ပေးလို့ ရမလာ…?” သူက ရှက်တက်တက် ပုံစံနဲ့ ပြောပါတယ်။
ကျမ စက္ကန့်ပိုင်းလောက် ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်သွားတယ်။ အဲ့အချိန်မှာပဲ sexy lara က ကျမ ကို ကြည့်နေတာနဲ့ ဝက်ဝံကို ဇာတ်လမ်းမြန်မြန်ဖြတ်ဖို့ အတွက် သူ့ကို အဲ့ဓါတ်ပုံ ပေးလိုက်မိပါတယ်။
Posted on September 12, 2010 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, အခန်းဆက်ဝတ္ထုရှည်2 Comments on ငါ မင်းကို မိုးတိမ်တွေပေါ်မှာ ချစ်မယ် (အခန်း-က-၈)
ငါ မင်းကို မိုးတိမ်တွေပေါ်မှာ ချစ်မယ် (အခန်း-က-၇)
ဒေါ်ဂျူ ရဲ့ တောင်းဆိုမှုအရ ဆက်ရေးလိုက်တယ်နော် အရင်ကဟာတွေ ပြန်ဘတ်ချင်ရင်…
ငါ မင်းကို မိုးတိမ်တွေပေါ်မှာ ချစ်မယ် (အခန်း-က-၁)
ငါ မင်းကို မိုးတိမ်တွေပေါ်မှာ ချစ်မယ် (အခန်း-က-၂)
ငါ မင်းကို မိုးတိမ်တွေပေါ်မှာ ချစ်မယ် (အခန်း-က-၃)
ငါ မင်းကို မိုးတိမ်တွေပေါ်မှာ ချစ်မယ် (အခန်း-က-၄)
ငါ မင်းကို မိုးတိမ်တွေပေါ်မှာ ချစ်မယ် (အခန်း-က-၅)
ငါ မင်းကို မိုးတိမ်တွေပေါ်မှာ ချစ်မယ် (အခန်း-က-၆)
တကယ်လို့ တခုဆီကလစ်မလုပ်ဘဲ အကုန်လုံးကို တစုတဝေးထဲ ဘတ်ချင်ရင်တော့ အောက်က လေဘယ်မှာ အခန်းဆက်ဝတ္ထုရှည်ဆိုတာ ကို နှိပ်လိုက်ပါနော်
တနင်္ဂနွေနေ့။ ကျမထုံးစံအတိုင်း ကိတ်မုန့်ဆိုင်မှာ အလုပ်ဆင်းရပါတယ်။ အားရင်း လဲကျမ နဲ့တူတူပဲ အလယ်တန်းအဆင့် လေးတန်း ကိုတက်ရပါတယ်။ ကျမ က အားရင် ကို စင်မင်း အကြောင်းပြောပြလိုက်ပါတယ်။
“သူဘယ်လိုနည်းလမ်းကောင်းနဲ့များ ဝိတ်ချလိုက်တာလဲ?” အားရင်းက အံ့သြ တကြီးလေသံနဲ့ ကျမကိုမေးပါတယ်။
“ငါမမေးမိဘူး။ သူက ငါနဲ့ လဲ စကားသိပ်မပြောဘူးဟ။ အဲ့ဒီအချိန်က လွတ်နေတဲ့ ခုံဆိုလို့ ငါ့ဘေးက ခုံပဲရှိတာလေ။ သူ့ပုံစံကြည့်ရတာ တခြားရွေးချယ်စရာမရှိတော့လို့ သာ ငါနဲ့လာထိုင်ပုံပဲ” ကျမ က မဲ့တဲ့တဲ့ နဲ့ ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။
အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ ကိတ်မုန့်ဆိုင်ရှေ့မှာ တန်းစီနေတဲ့လူတန်းကြီးကြားကနေ ဆန့်ထွက်လာတဲ့ လယ်သာရှုးဖိနပ် ဝတ်ခြေထောက်တုတ်တုတ်တစုံကို ကျမတွေ့လိုက် ရပါတယ်။ အဲ့ဒီလယ်သာရှုးဖိနပ်ဝတ်ခြေထောက် တုတ်တုတ်ကြီးက လူတန်းကြီးရဲ့ ဘေး ကို နည်းနည်း ခွဲပြီး ခြေချဲရပ်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ မတော်တဆ ၂ လက်မတိတိမြင့်တဲ့ ဒေါက်တခု ကို ကျမတွေ့လိုက်ရပါတယ်။
“ဘုရားရေ…အဲ့တာ လူပုလေး…” ကျမ ပါးစပ်ကလဲအော်ရင်း ချက်ချင်း လိုလို ထိုင်ချလိုက်ပါတယ်။ အားရင်း ရဲ့ စကတ်အောက်ခြေစွန်းကို ဆွဲပြီး အသံတိုးတိုးနဲ့ အော်ရင်း အရောင်းကောင်တာ စားပွဲနောက်မှာ ကွယ်ပြီး ပုန်းနေလိုက်တယ်။
“အော်….အဲ့တာနင်ပြောပြောနေတဲ့ အတန်းပိုင်လူပုလေးပေါ့လေ။ သူဒီလောက် ပု တာတောင် နင်က မြင်သေးတယ်?” သူမက ခြေဖျားလေး ထောက်ပြီး ကျမ ပါးစပ်မှာ တချိန်လုံး ဂါထာ လိုရွတ်ရွတ်နေတဲ့ ဂန္တဝင် လူပုလေး ကို လှန်းကြည့်ပါတယ်။
“ငါ သူ့ရဲ့ ဖိနပ်ဒေါက်ကို မြင်တာဟဲ့” ကျမ တိုးတိုးလေး ပြောလိုက်ပါတယ်။
“အင်း…ငါတွေ့ပြီ” အားရင်း က ပြောတယ်။
ကျမက အားရင်းရဲ့ ခြေသလုံးနားမှာ ဝပ်ပြီး ပုန်းနေတုံးပဲ။
“ကိတ်မုန့် တတုံးပေးပါ” ခဏနေတော့ လူပုလေးရဲ့ ဈေးဝယ်တဲ့ အသံ ကို ကျမ အရောင်း ကောင်တာ တဘက်ကနေ ကြားရပါတယ်။
“သူထွက်သွားပြီ” အားရင်းက ကျမရဲ့ ပုခုံး ကို ကပုတ်ပြီး အသိပေးပါတယ်။
ကျမ မတ်တပ်ရပ်ရင်း သက်ပြင်း ကိုချလိုက်တယ်။ ကိတ်မုန့်ကို ဝယ်ပြီး လှည့်ထွက်သွားတာနဲ့ တပြိုင်နက် နည်းနည်းလေးမှ ထပ်စောင့်နိုင်ပုံမရတဲ့ လူပုလေး ရဲ့ကျောပြင်ကိုတွေ့ရတယ်။ ကိတ်မုန့် တလုတ်ကို ဇွန်းနဲ့ ကိုက်ပြီးတော့ ပါးစပ်ထဲကို အသားကုန် ထိုးသွင်းနေတဲ့ပုံပဲ။ သူ့ကြည့်ရတာ ငတ်နေတာ တော်တော်ကြာတဲ့ပုံနဲ့ အရာသာရှိရှိ စားနေလိုက်တာ။
“ငါဒီမှာ အလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတာ သူလုံးဝ သိလို့မဖြစ်ဘူး” ကျမ ပြောလိုက် တယ်။
“ဘာလို့လဲ?…နင်တို့ကျောင်းက ကျောင်းသားတွေကို အချိန်ပိုင်း အလုပ်လုပ်ဖို့ခွင့် မပြုဘူးလား?” အားရင်းက ကျမ ကိုမေးပါတယ်။
ကျမ လူပုလေးရဲ့ ကိတ်မုန့်ကို အငမ်းမရ စားနေတဲ့ ကျောပြင်ကိုကြည့်ရင်း
“တကယ်လို့ သူ့ကို ဒီလိုပုံနဲ့ ငါမြင်တာသာ သိသွားရင် ငါ့ကို ကောင်းကောင်း ပုံစံပေးလိမ့်မယ်” လို့ ကျမ ပြောလိုက်ပါတယ်။
“သူ့ကြည့်ရတာ သနားစရာကောင်းလိုက်တာနော်။ အရပ်ဒီလောက်ပုတော့ ငယ်ငယ်ကဆို ခဏခဏ ကလေးအချင်းချင်း အနိုင်ကျင့်ခံရမှာပဲ” အားရင်းက ဆိုပါတယ်။
သူမရဲ့ မျက်စိထဲမှာတော့ ဘယ်ယောက်ျားတယောက်မဆို မိဘမဲ့ကလေးတွေ လိုပဲ သနားစရာကောင်းနေတော့တာပဲ။
“ဝက်ဝံ ကျောင်းရသွားပြီလား?” ကျမ က အဆက်အစပ်မရှိမေးလိုက်တယ်။
“မရသေးဘူးထင်တယ်” သူမက ပြန်ဖြေတယ်။
“အဲ့တာဆိုဘယ်လိုလုပ်ကြမှာလဲ…ကျောင်းတွေပဲပြန်ဖွင့်နေပြီ။” လို့ ကျမက ပြော လိုက်တယ်။
နောက်တပတ်ခြားပြီးတော့ ကျမနဲ့ အားရင်း ကိတ်မုန့်ဆိုင်မှာ ထပ်တွေ့ကြပြန် ပါတယ်။
“ဟဲ့ လက်စသတ်တော့ ဝက်ဝံ က နင်တို့ကျောင်းမှာ ရသွားတာကိုး” ကျမ ကို အားရင်း က သတင်းပေးပါတယ်။
“ဟင်…ဘယ်အတန်းမှာလဲ?” ကျမ အံသြတကြီးမေးလိုက်မိတယ်။
“နင်နဲ့တူတူပဲ အလယ်တန်းအဆင့်ရဲ့ စတုတ္ထတန်းလေ။ ဘယ်အတန်းလဲတော့ ငါလဲသေချာမသိဘူးဟ။ နင်တို့ အတန်းထဲမှာရော ဒီရက်ပိုင်းမှာ ကျောင်းလာတဲ့ နောက်ကျ ကျောင်းသားသစ်မရှိဘူးလား?”
“ဝက်ဝံရဲ့ နာမည်ကဘာလဲ?” ကျမ အလန့်တကြား မျက်လုံးမိတ်လိုက်မိတယ်။
“ဟင် လက်စသတ်တော့ သူကိုး” ကျမ အော်ပြီးပြောလိုက်မိတယ်။
“နင် သူ့ကို တွေ့ပြီးပြီပေါ့?”
“နင်ပြောတဲ့ ဝက်ဝံဆိုတာ တကယ့် ဝက်ဝံ လိုပဲ ထွားထွား မြင့်မြင့် မဟုတ်ဘူး လား?”
““ဝက်ဝံ” ဆိုတာ သူ့နာမည်ပြောပါဟ။ ငါသူနဲ့မတွေ့တာ နှစ်နှစ်တောင်ရှိသွားပြီ။ အဲ့တော့ သူ အရပ်ပိုမြင့်လာလား ထွားလာလား မသိတော့ဘူးဟ၊ ငါမှတ်မိသလောက်ကတော့ သူက ပုတဲ့အထဲမှာ လုံးဝမပါတာတော့ သေချာတယ် အရပ် ဆက်ထွက်သေးလားတော့မသိဘူး”
“အေး… သူအရပ်ဆက်ထွက်လာသေးတယ်” ကျမ သူ့စကား ကို ဖြည့်ပြီးပြောပေး လိုက်တယ်။
“ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲပြောပါအုံး” အားရင်းက စိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့မေးပါတယ်။
“ငါ သူ့ဆံပင် ပုံ ကို ကြည့်မရဘူး” ကျမ မကျေမနပ်ရေရွတ်လိုက်တယ်။
ကိစ္စကဒီလိုပါ။ တနင်္လာနေ့က ကျောင်းတက်တော့ ပထမအချိန်ကို သင်ဖို့လာတဲ့ လူပုလေးရဲ့ နောက်မှာ သူ့ထက် ခေါင်းနှစ်လုံးလောက်ပိုမြင့်နေတဲ့ ကျောင်းသားသစ် တယောက်ပါလာပါတယ်။
“ကဲ မင်းက ဟိုနားက နောက်ထပ် အရွက်ခြောက်ကေတယောက်ရဲ့ ဘေးမှာ သွားထိုင်ချေ” လို့ လူပုလေးက ကျမကို လက်ညိုးညွှန်ပြီး ကျောင်းသားသစ်ကို ပြောပါ တယ်။
တတန်းသားလုံးဆီ က ထိန်းမရတဲ့ ရယ်သံတွေထွက်လာပါတယ်။ အဲ့ဒီ ပုခုံးပေါ်မှာ လေးတေးတေး လွယ်အိတ်ကို ချိတ်ထားတဲ့ အရပ်မြင့်မြင့် ပိန်ပိန်နဲ့ ကောင်လေးက ရှက်တက်တက်ကြောင်တောင်တောင် မျက်နှာထားနဲ့ ကျမနဲ့ စင်မင်းနောက်က လွတ်နေတဲ့ ခုံတန်းမှာဝင်ထိုက်လိုက်ပါတယ်။ လက်စသတ်တော့ သူကလဲ ကျမလိုပဲ “ရီလုကေ” ကောက်ထားတာကိုး အဲ့တာကြောင့် ကျမမှာ နေရင် ထိုင်ရင်းတတန်းလုံးရဲ့ ဟာသဖြစ်ရ တာပေါ့။
“ဘယ်လိုစိတ်ကူးနဲ့များ ယောက်ျားတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ ဆံပင်ကို သွားကောက် ထားရတာပါလိမ့်?” ကျမနဲ့ကျိရိ မုန့်စားဆင်းတော့ အိမ်သာထဲမှာ အတင်းတုတ် နေကြ ပါတယ်။
“ကြည့်ရတာ သူလဲ ရီလု သီချင်းတွေ ကြိုက်လို့နဲ့တူပါတယ်” ကျိရိက ပြောပါတယ်။
“ငါ့ဆံပင်တွေ အကုန်ပြန်သွားဖြောင့်ပစ်မယ်” ကျမ အိမ်သာမှန်ထဲက ကိုယ့်ပုံကို ကိုယ် လှမ်းကြည့်ရင်း ပြောလိုက်ပါတယ်။
“သူက ဆံပင်တွေကောက်ထားတယ်…? သိပ်အံ့သြဖို့ကောင်းတာပဲ။ သူတလျောက်လုံး ဘိူသီဘတ်သီနဲ့ အလှအပ လဲမကြိုက်ဘူး။ ဘယ်လိုပြောပြော ဆံပင် သွားကောက်မယ့် ယောက်ျားတယောက်လို့ ယုံစရာမရှိဘူး။ ပြီးတော့ ကောက်လိုက် တော့လဲ “ရီလုကေ” ကောက်တယ်။ ငါ့အထင် တခုခုတော့ ရှိကိုရှိရမယ်ဟ” အားရင်း က ဘယ်လိုမှ မယုံနိုင်တဲ့ မျက်ဝန်းတွေနဲ့ ပြောပါတယ်။
“ဘာလို့များ အဲ့လိုဖြစ်ရတာပါလိမ့်” ကျမ ကိုယ့်ခေါင်း ကိုယ်ကိုင်ပြီး နှုတ်ခမ်းဆူ ပြောလိုက်ပါတယ်။
ကျမ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ တွေ့လိုက်ရတဲ့ ဝက်ဝံနဲ့ ကျမ အားရင်းဆီက ကြားထားတဲ့ သူရဲကောင်းဆန်ဆန် ဝက်ဝံနဲ့ ဘယ်လိုမှ ဆက်စပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ အဲ့ဒီရက်ပိုင်း ကျမ သူ့ကို လှည့်မကြည့်ဖြစ်အောင်နေမိတယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူ့ကို လှည့်ကြည့်မိရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် မှန်ထဲမှာ ပြန်ကြည့်နေရသလိုပဲ။ ကျိရိကတောင်ပြောသေးတယ်။ တကယ်လို့ ကျမကသာ စကတ်ဝတ်တာမဟုတ်ရင် သူက ကျမတို့ကိုလူတောင်မှား နိုင် တယ်တဲ့။
Posted on September 12, 2010 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, အခန်းဆက်ဝတ္ထုရှည်1 Comment on ငါ မင်းကို မိုးတိမ်တွေပေါ်မှာ ချစ်မယ် (အခန်း-က-၇)
တနေ့က အသက် ၅၀ လောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်တဲ့ ဘိုးတော်တပါး နဲ့ စကားစမည် ပြောဖြစ်တယ်။ ဘိုးတော် ဆိုတာ ဒီနေရာမှာ အဖိုးကြီး ကို ဆိုလိုတာပါ။ သူ့လို့ အသက်အရွယ် ရောက်ပြီဆိုရင် အကောင်းဆုံးကတော့ အသက် ၁၈ ကနေ ၂၄ နှစ်ကြားရှိတဲ့ မိန်းကလေးတွေကို ရှာပြီး ရည်းစားထားသင့်တယ်တဲ့။ ပြောရဲတယ်နော်။
အဲ့တာနဲ့ ကိုယ်က “ဘာလို့ ၁၈ ကနေ ၂၄ ကြားလို့ ပြောရတာလဲ” လို့မေးတော့ သူက… (ရှေးလူကြီးတွေ ပြောထားတဲ့ ဒွေးချိုး လေးတိုး လို့ ပြန်မဖြေပါဘူး) “ဒီအသက်အပိုင်းအခြားမှာ ရှိတဲ့ ကောင်မလေးတွေက လူကို အရမ်းမတွယ်ကပ်တတ်ဘူး” လို့ ဆိုပါတယ်။ ရှင်းပါ့မယ်။ လူကို မတွယ်ကပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး ပြောချင်တာ က နှစ်ယောက်တဘဝ အတူတူ ပေါင်းဖက် ကြရမယ့် အနာဂတ်တို့၊ အိမ်တဆောင် မီးတပြောင်တို့၊ ဘာဘာ ညာညာ တို့ ကို မတောင်းဆို တတ်ဘူး၊ သူတို့ရဲ့ ကမ္ဘာက ပန်းချီဆရာတယောက် လက်စွမ်းပြ ထားတဲ့ ပန်းချီကား တချပ်လို အရောင်စုံတွေနဲ့ ပြည့်နေသေးတယ်။ သူက သူမ ကိုစွန့်ပစ်မယ့် အခွင့်အရေးထက် သူမက သူ့ကို စွန့်ပစ်မယ့် အခွင့်အရေးက ပိုများနေသေးတယ်။ သူ့အနေနဲ့ ဘာမှ တာဝန်ယူ စရာ မလိုဘူး။
ဒါပေမယ့် အသက်၂၅နှစ်ကျော်သွားတဲ့ မိန်းမတွေ အနေနဲ့ကျတော့ လွယ်လွယ် နဲ့ ခါထုတ်ဖို့ ခက်သွားပြီ။ အဲ့လောက်မလွယ်တော့ဘူး။ ယောက်ျားတယောက်ကို ချစ်မိပြီဆိုရင် သူမတို့ တွေက ကတိကဝတ်တွေ ဘာတွေ လိုချင်လာကြတယ်။ တောင်းဆိုလာကြတယ်။ အိမ်ထောင် ပြုဖို့ ရည်ရွယ်လာကြတယ်။ အဲ့ဒီယောက်ျားက သူတို့လိုချင်တာ၊ တောင်းဆိုတာတွေကို မလိုက် လျောနိုင်တဲ့ အခါကျရင် အနေအထားက တခါတခါ သူမ အပေါ်မတရားသလို ဖြစ်သွားတတ်တယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအသက်အရွယ် ရှိတဲ့ မိန်းမတွေကခွာထုတ်ဖို့၊ ပစ်ဖို့ ပိုခက် တယ်။
သူက အဲ့လိုပြောတော့ ကိုယ်က သူ့ကို ဟာသ ဖောက်ပါတယ်။
“အဲ့တာဆို ဦး ဘေးနားမှာ ဘာလို့ အသက် ၃၀ ကနေ ၄၀ ပတ်ဝန်းကျင် ရှိတဲ့ မိန်းမကြီးတွေ ကိုပဲတွေ့နေရတာလဲ? ၁၈ နဲ့ ၂၄နှစ်ကြားက ကောင်မလေးတွေရော်?” လို့မေးတော့ သူက “ဟ ပြောပြီးပြီလေ ငါ့ကောင်ရ။ အသက် ၃၀ ကျော်တဲ့ မိန်းမတွေက ပစ်ရခက်ပါတယ်လို့” လို့ပြန် ဖြေပါတယ်။ သူ့ဟာနဲ့ သူကတော့ တော်တော်ဟုတ်နေတဲ့ ဘိုးတော်ပါပဲ။
ဟုတ်တော့ ဟုတ်ပါတယ်။ ၁၈ ကနေ ၂၄နစ် ကြားဆိုတာ တော်တော့်ကို လှပခဲ့တဲ့ နေ့ရက် တွေပါ။ အဲ့အချိန်တွေတုံးက လူတယောက် ကိုချစ်တယ်ဆိုတာ ချစ်ချင်လို့ ကိုချစ်တာပါ။ လက်ထပ်ဖို့ ချစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်လို့ ယောက်ျားတယောက်ကို နှစ်နှစ်ကာကာ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ချစ်နေမိတယ်ဆိုရင်တောင် မိန်းကလေး အနေနဲ့ အဲ့သူနဲ့သာ သေတပန် သက်တဆုံး ပေါင်းဖက်ကြရမယ် လို့တထစ်ချ မတွကထာ်းကြပါဘူး။ (အဲ့ဒီ အသက်အရွယ် တုံးကပြောတာနော် ချွင်းချက်တွေ ဓလေ့ထုံးစံတွေ ဆိုတာထက် အရှိကိုအရှိအတိုင်း မြင်စေ ပြောစေ၊ ဝန်ခံစေချင်ပါတယ်) အဲ့ဒီ အသက်အရွယ်မှာဆိုရင် ကလေးဆန်လို့လဲ ရသေးသလို အချစ်ဆိုတဲ့ ကစားပွဲမှာ ရှုံးနိမ့်လို့လဲရသေးတယ်။ မချစ်သင့်တဲ့ သူတယောက်ကို ကိုယ်က မှား ချစ်မိတယ်။ ချစ်မိလို့ ကိုချစ်မိ တယ်။ မသင့်တော်ဘူး မအပ်စပ်ဘူး ဆိုတာ ကို သိသိရက်နဲ့ ကိုချစ်မိတယ်။ မှားတယ် ဆိုတာ သိတယ်။ ချစ်တယ်။ ဘာဖြစ်သေးလဲ။ မှား နိုင်သေးတယ်။ မှား နိုင်တဲ့ အရင်းအနှီး ရှိနေသေးတယ်။ နုပျိုမှုရှိသေးတယ်။ နောက် တယောက်ကို ထပ်တွေ့ဖို့ ထပ်ချစ်မိဖို့ ထပ်ချစ်နိုင်ဖို့ အခွင့်အလမ်းတွေ ရှိနေသေးတယ်။ ကျန်နေသေးတယ်။ အချိန်တွေ ရှိနေသေးတယ်။ တကယ် ပြောတာပါ။ နုပျိုနေသေးသ၍ ပျိုမျစ်နေသေးသ၍ အစကနေ ပြန်စလို့ ရသေးတယ်။ ဘဝ လက်တွဲဖော် ကို နောက်တယောက် ထပ်ရှာနိုင်သေးတယ်။ အဲ့ဒီ အသက်အရွယ်မှာဆိုရင် မိန်းကလေးတွေက သူမရဲ့ဘဝမှာ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးတွေကိုသာ ဖြစ်နိုင်ရင်နောက်ထပ် အကြိမ်ခပ်နည်းနည်းလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် ထပ်တွေ့ကြုံမြည်းစမ်းကြည့် ချင်သေးတာပါ။ နောက်ထပ် ယောက်ျား နည်းနည်းလောက်ဖြစ်ဖြစ် ထပ်သိချင်သေးတယ်။ ဒီလောကကြီးအကြောင်းကို ထပ်စူးစမ်းချင်သေးတယ်။ မာယာတွေကိုလေ့လာချင်သေးတယ်။
ဟော အသက် ၂၅ လဲ ရောက်ရော မိန်းကလေး စိတ်ထဲမှာ ရုတ်တရက် ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း နေချင်စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်။ သူဘဝကို အလေးထားတတ် လာပြီလေ။ သူလေးနက်တတ် လာပြီပေါ့။ ဘဝ ဆိုတာကို သူစတင်တွေးတောလာပြီလေ။ သူရင့်ကျက်လာပြီလေ။
ဒီအချိန်မှာ ချစ်သူရှာတာ ချစ်သူထားတာ ဆိုတာ လက်ထပ်ဖို့ အတွက် အခြေခံ အုတ်မြစ် ပေါ့။
ဒီလိုအသက်အရွယ်မှာ သူနဲ့တဘဝလုံး တသက်လုံး လက်တွဲပါ့မယ် လို့မရည်ရွယ်ဘဲနဲ့တော့ ဘယ်သကောင့်သား ယောက်ျားတယောက်ကမှ သူ့ ဘဝလမ်းကြောင်း ကိုမနှောင့်ယှက်လေနဲ့။ ကလေး ဆန်လို့ ရတဲ့၊ အချစ်မှာ ရှုံးနိမ့်လို့ ရတဲ့ အသက်အရွယ်က လွန်သွားခဲ့ပြီလေ။
ဒီအရွယ်က တကယ့်ကို ရင်းနှီးရတော့မယ့် အရွယ်။
ကဲ အခုက စပြီနော်။
Posted on September 10, 2010 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ဆောင်းပါး5 Comments on ၁၈-၂၄